Etu aga-esi amata ohere SEO na saịtị gị iji melite ogo na nsonaazụ ọchụchọ iji Semrush | Martech Zone
Friday, February 19, 2021 Fraịde, Machị 5, 2021 Douglas Karr
Kemgbe ọtụtụ afọ, enyerela m ọtụtụ narị otu aka na ịwulite atụmatụ ha yana mezue ihu igwe nchọ ha n'ozuzu. Usoro a pụtara n’ihu:
Performance - Gbaa mbọ hụ na saịtị ha na-arụ ọrụ nke ọma gbasara ọsọ.
Device - Gbaa mbọ hụ na ahụmịhe saịtị ha dị elu na desktọọpụ na ọkachasị mkpanaka.
mbọn - Gbaa mbọ hụ na saịtị ha mara mma, dị mfe iji, wee na-egosipụta akara ha na ọdịiche dị iche iche.
content - Gbaa mbọ hụ na ha nwere ọba akwụkwọ ọdịnaya nke gụnyere ọkwa ọ bụla nke njem ndị na-azụ ha, ma jiri usoro ọ bụla na-arụ ọrụ nke ọma.
Kpọọ-na-Action - Gbaa mbọ hụ na ha nyere ndị ọbịa ihe ha ga-eme na peeji ọ bụla yana ọdịnaya ọ bụla.
Promotion - Gbaa mbọ hụ na ha nwere atụmatụ dị ike iji hụ na e kesara ọdịnaya ha na ntanetị site na mgbasa ozi mmekọrịta, akwụkwọ ndekọ aha dị elu, ụlọ ọrụ na saịtị saịtị.
Ọchịchọ abụghị naanị maka iwepụta ọdịnaya, ọ bụ maka imepụta ọdịnaya kachasị elu ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi gị.
Kedu ndị na-asọmpi ọchụchọ gị?
Nke ahụ nwere ike ịdị ka ajụjụ dị ịtụnanya, mana ndị na-asọ mpi na njin ọchụchọ abụghị naanị ụlọ ọrụ nwere ngwaahịa na ọrụ asọmpi. Gị asọmpi na search engines bụ:
Websiteslọ ọrụ weebụsaịtị na-asọ mpi maka otu mkpụrụokwu ahụ nwere ike ịmegharị ndị na-asọmpi gị.
Akwụkwọ ndekọ aha ọnlaịnụ onye naanị ya bụ ọkwa ka gị mma ka a manye gị ka gị na ha kpọsaa.
Akwụkwọ ntanetị dị ka Wikipedia nwere oke njikwa ikike.
Akụkọ weebụsaịtị nke ahụ nwere ike isonye na gị na aha akara gị n'ihi ikike njikwa injinị ihe nchọgharị ha.
Mmụta weebụsaịtị nke ahụ nwere ike ịnwe klaasị ma ọ bụ nkuzi na otu isiokwu. Ebe agụmakwụkwọ na-enwekarị ikike dị ịrịba ama.
elekọta mmadụ media saịtị ndị na-anwa ikere òkè na ndị ahịa gị nwere ike ịmanye gị ka gị na ha kpọsaa.
Ebe nrụọrụ weebụ Influencer ndị gị na ndị ahịa gị na-arụsi ọrụ ike ka ha nwee ike ree mgbasa ozi ma ọ bụ soro ndị mmekọ nwee mmekọ.
Ileba anya, Martech Zone bụ kpam kpam onye na-asọmpi na ọtụtụ ndị na-eweta Martech n'ihe banyere ogo na okporo ụzọ. Iji kpata ego na saịtị m, achọrọ m ịsọ mpi ma merie isiokwu dị egwu na nnukwu ahịa. Mgbe m mere nke ahụ, ọtụtụ mmadụ ga-pịa mgbasa ozi na saịtị m ma ọ bụ njikọ njikọta - drivingvenue. Mgbe ụfọdụ, ogo m na-eduga na ụlọ ọrụ ndị na-akwado posts na edemede iji gbalịa ịkwọ ụgbọala na-eduga nduzi ha.
Kedu ka ị si achọta ndị asọmpi gị?
Ọ bụ ezie na ị nwere ike iche na ị ga - eme nyocha ma hụ onye gosipụtara nsonaazụ, nke ahụ abụghị ụzọ dị ukwuu iji chọpụta ndị ndị asọmpi gị. Ihe kpatara ya bụ na engines ọchụchọ hazie ibe nchọta nsonaazụ ọchụchọ (SERPs) na onye nyocha ihe nyocha - nke ọma na nke ala.
Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchọpụta asọmpi gị n'ezie - ị kwesịrị iji ngwa ọrụ dịka Semrush na-anakọta ma na-enye ọgụgụ isi na mkpesa gburugburu nsonaazụ ọchụchọ engine.
Semrush nwere ike inyere gị aka ịchọpụta otu ngalaba gị si eme gafee isiokwu ma nyere gị aka ịchọpụta ọdịiche na ohere etu ị ga - esi bulie ogo gị niile gbasara asọmpi gị.
Kwụpụ 1: Lelee ogo ngalaba gị site na isiokwu
Nzọụkwụ mbụ m na-eme mgbe m na-eme nyocha asọmpi bụ ịmata ebe m nọ n'ọkwa. Ihe kpatara nke a bụ ihe dị mfe easier ọ dịịrị m mfe iji na-ebuli na-agbago elu na Keywords na m kwalite on ugbua karịa na-agbalị ọkwá na Keywords na m na saịtị ahụghị maka.
Ihe nzacha m na-eji dị iche:
ọnọdụ - M na-amalite na ọnọdụ 4-10 ebe m nọ na peeji nke 1 ma ọ bụrụ na m nwere ike iru ọnọdụ 3, amaara m na m ga-eme ka okporo ụzọ m bawanye.
Ọdịiche Na Ọnọdụ - Achọrọ m ilele ọnọdụ ebe m na-abawanye ọkwa m kwa ọnwa n’ihi na nke ahụ pụtara na ọdịnaya na-enweta ikike yana enwere m ike ịkwalite na ịkwalite ya iji bulie ya elu.
Mpịakọta - Ọ bụrụ na mpịakọta dị iri puku kwuru iri ma ọ bụ otu narị puku, enwere m ike iwepụta ibe ndị ahụ mana agaghị m atụ anya nsonaazụ ozugbo. N'ihi ya, ana m achọkarị ịchọta ọchụchọ n'etiti 100 na 1,000 ọchụchọ kwa ọnwa.
Ileba amụ na Optimizing A na-ahazi Page
Ga-achọpụta na agara m n'ihu Bọchị Valentine n'asọmpi. Nke ahụ bụ isiokwu m na-arụ ọrụ n'ọnwa gara aga na nkwadebe maka ndị na-ere ahịa na-eme nyocha na asọmpi mgbasa ozi mmekọrịta… ọ rụpụtara! Enwetara m ọtụtụ puku nleta site na ịchapụta otu isiokwu ochie na ịme ume data na onyonyo dị na ya. M ọbụna kachasị mma post slug iji lekwasịrị anya na isiokwu ndị ahụ, na-agbanwe "ụbọchị valentines-campaign" na "valentines-day-social-media-n'asọmpi".
N'afọ gara aga, enwetara m ihe nleta 27 site na engines ọchụchọ n'etiti February 1 na 15th. N'afọ a, enwetara m nleta 905 site na engines ọchụchọ. Nke ahụ bụ mmụba mara mma na okporo ụzọ ahịhịa maka obere mgbanwe na ọdịnaya nke ibe ahụ.
Nzọụkwụ 2: Chọpụta Ohere Ohere
Isiokwu mbu na ndepụta ahụ bụ akara, yabụ enweghị m obi ike na m ga-eme nke ọma ma ọ bụ merie okporo ụzọ ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ na-achọ Acquire.io… ma eleghị anya ha chọrọ ezigbo weebụsaịtị.
Otú ọ dị, isiokwu nke abụọ - Ọbá akwụkwọ ọdịnaya - bụ otu na m nwere mmasị na ogo mma na. Ọ bụ isi maka ọrụ azụmaahịa m ma enwere m obi ụtọ inyere ndị na-ere ahịa aka ịrụ ọrụ nke ọma ma rụpụta ọrụ nke ọma na ọdịnaya ha iji mee ka nsonaazụ ahịa pụta.
NDMỌD:: Ndi na peeji ugbua n'usoro na metụtara Keywords?
Echefula na ị nwere ike imerụ okporo ụzọ ọchụchọ gị niile ma ọ bụrụ na ị were peeji nke dị elu ma mebie njikarịcha ya maka otu isiokwu. Yabụ, ihe nke abụọ m na-eme bụ ịhụ ihe ọzọ peeji ahụ akọwapụtara maka ya site na ịpị URL dị na Semrush akụkọ. M na-ehichapụ ihe nzacha m niile wee dezie ndepụta ahụ site na ọnọdụ ya.
Yabụ… nke a dị mma. Mgbe m kwụrụ maka ụlọ na ike a n'ọbá akwụkwọ ọdịnaya, o doro anya na na-ogo m elu na Ọbá akwụkwọ ọdịnaya ga-akwọ ụgbọala ọtụtụ ndị ọzọ na saịtị m.
Rịba ama, na Njirimara SERP na enwere snippets, vidiyo, na nyocha. Achọrọ m ịhụ ma ọ bụrụ na etinyere m ihe ọ bụla nwere ike inyere m aka n'edemede m.
Nzọụkwụ 3: Mata My SEO Asọmpi
Ọ bụrụ na m pịa Ọbá akwụkwọ ọdịnaya na kọlụm mbụ, enwere m ike ịhụ ndị ndị asọmpi m na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ engine:
Kwụpụ 4: Tulee Ọdịnaya Gị na Ọdịnaya Ha
Iji atụmatụ SERP site na mbụ ma nyochaa nke ọ bụla n'ime ibe ndị a, enwere m ike ịpụta ugbu a maka ndụmọdụ maka otu esi emeziwanye ọdịnaya m niile ka edepụtara ya maka Ọbá akwụkwọ ọdịnaya, yana ịmata ụfọdụ ohere otú iji kwalite ya mbanye ụfọdụ backlinks… nke ga-emecha mee m họọrọ mma.
M n'ezie nwere ndá »‹ á »zá» backlinks m peeji nke kará »‹ a ka á »tá» of tá »the peeji nke ranking n'elu m. N'ezie, ụfọdụ n'ime ngalaba ndị ahụ nwere ikike ka ukwuu ka m wee nweta ọrụ m. Edere edemede dị elu na ibe ahụ na 2013, yabụ enwere m obi ike na m nwere ike ị nweta nsonaazụ kacha mma. Na, n’inyocha ndepụta nke isiokwu… ụfọdụ n’ime ha adịghịdị mkpa maka isiokwu ahụ ma ọlị.
Kwụpụ 5: Meziwanye Ọdịnaya Gị
Ka anyị che ya ihu… edemede m abụghị nke kachasị… yabụ ọ bụ oge iji bulie ya elu. N'okwu a, ekwenyere m na m nwere ike:
Na-ebuli aha nke isiokwu.
Tinye ntinye ọzọ agba oyiyi nke ahụ ga - eme ka okporo ụzọ ndị ọzọ pụọ na nkwalite mgbasa ozi.
tinye a video ebe m na-akowa atumatu a.
Tinyekwuo eserese n'ime isiokwu.
Fanye ọzọ nju gburugburu njem ndị na-azụ ahịa na otu ọdịnaya si eme ka njikọta na ntụgharị gbanwee.
N'okwu a, ekwenyere m na imelite ọdịnaya na ịhazigharị ya na mgbasa ozi mgbasa ozi zuru oke iji mee ka nsonaazụ ọchụchọ ka mma. Ọhụrụ ndị mmadụ na-agụ ọdịnaya na ịkekọrịta ya n'ịntanetị na-enye ihe ngosi dị mkpa na Google na ọdịnaya dị elu, dị ọhụrụ, na a ga-ahọrọ ya karịa.
Kwụpụ 6: Bipụta ma kwalite ọdịnaya gị
Ọ bụrụ na edemede gị dị na blọọgụ gị, atụla ụjọ iweghachi ọdịnaya ahụ dị ka nke ọhụụ, na-edebe otu URL na slug. Maka na ị debelarị, ị chọghị ịgbanwe URL nke ibe gị!
Na, ozugbo ebigharịrị ya, ị ga-achọ ikesa ma kwalite ọdịnaya ahụ site na akwụkwọ ozi email gị, ntinye aka email, yana profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta gị.
Nzọụkwụ 7: Lelee nchịkọta gị na Semrush!
M na-ahụkarị mmụba ngwa ngwa na nleta mgbe m na-ebipụtaghachi ma na-akwalite ọdịnaya mana ọ bụghị mgbanwe ozugbo na ogo ogo. Ana m agaghachị Semrush in 2 ka 3 izu ịhụ otú mgbanwe m metụtara na mkpokọta ogo maka otu URL ahụ.
Nke a bụ a na-emeri atụmatụ m na-etinye na kwa izu maka ndị ahịa m… ọ dịkwa ịtụnanya etu o si arụ ọrụ.
Bido na Semrush!
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọdịnaya iji mee ka mkpụrụ ndụ na-eto eto, jide n'aka na ị ga-achọpụta Semrush's Ngwaọrụ Ahịa Ahịa ebe ị nwere ike ịhazi, dee, ma nyochaa ọdịnaya gị niile n'otu ebe.
The Semrush Platform Marketing Platform na-enye ọtụtụ ngwọta maka ịmepụta usoro ihe ịga nke ọma na ịmepụta ọdịnaya ndị na-ege gị ntị. Gwakọta ihe okike na nyocha na usoro ọ bụla nke arụmọrụ gị.
Ndi Optimized Page kacha mma? Choputa na edemede m!
Semrush ka e deghariri na aha ha isiokwu nchekwa data sitere na 17.6B ruo 20B. Afọ abụọ gara aga naanị mkpụrụedemede 2B gụnyere ya - nke ahụ bụ Ọganihu 10x! Ha gbanwere atụmatụ ha:
kwa - Freelancers, mmalite, na ndị na-ere ahịa ụlọ na-eji ngwungwu a mee ka ọrụ SEO, PPC, na SMM ha tolite.
Gbalịa Semrush Pro n'efu!
guru - businesslọ ọrụ na-azụ ahịa na azụmaahịa na-eji ngwungwu a. O nwere atụmatụ pro niile na mgbakwunye na ikpo okwu ahịa ọdịnaya, data akụkọ ihe mere eme, yana mwekota nke Google Data Studio.
Gbalịa Semrush Guru n'efu!
Business - Agencies, e-commerce project, na nnukwu saịtị na-eji ngwugwu a. Ọ gụnyere nnweta API, agbatịala oke yana nhọrọ nkesa, yana Ekekọrịta akụkọ gbasara Voice.
Denye aha na Semrush Business
Ngosi: Abụ m mmekọ nke Semrush na m na-eji njikọ njikọta ha na edemede a.
Tags: nyocha ogo ọdịnayaesi melite ogootu esi enyocha ndị asọmpi n'ịntanetịOhere inweta ihenyocha nyocha enginensonaazụ nsonaazụ ọchụchọsearch resultssemrushnyocha seoseo nyochaseo ohereseo ogo